မောငျ(စှယျစုံကမျြး): October 2013
အလွယ်ကူဆုံး Add Elemic Grape Purple Menu ( Grape Purple )
မင်္ဂလာပါ ဘလော့ချစ်သောပရိတ်သတ်အပေါင်းတို့... သည်နေ့ ရေးဖြစ်တဲ့ အကြောင်းရာလေးကတော့
ဘလော့တစ်ခုမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းစဉ်လို့ ခေါ်တဲ့ Menu လေးတွေ ဖန်တီးနည်းပါ။
သည်နည်းလေးကို အလွယ်ဆုံးနဲ့ မရှင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ရေးသား တင်ပြပေးထားပါတယ်... သူကတော့
Animated ပုံစံလေးနဲ့ တမျိုးတော့ လှပါတယ်... စိတ်ဝင်စားမယ်ဆို အောက်မှာ လုပ်နည်းနဲ့ လိုအပ်သော
ကုဒ်တွေကို ညွှန်ပြ ရှင်းလင်းထားပါတယ်... အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်...
Author Unknown at 6:32:00 PM0မှတ်ချက်
Author Zaw Min Than at 1:28:00 PM3မှတ်ချက်
Author Pyae Phyo (MMiTD) at 11:36:00 AM2မှတ်ချက်
စိမ့်စိမ့် ( တောင်ကြီး)
Author Anonymous at 2:14:00 PM0မှတ်ချက်
ပြုံးလို့ ကြည့်ကြ လူတစ်စုက
အပျော်ထုလည်း ကြီးမားပါစ ရောင်စုံညဝယ်။
ဆုံးစဘဝ ကြည်နူးရွင်ပြ ရောင်စုံညနဲ့ 
မှောင်မိုက်ပါစေ အိုည တစ္ဆေတို့...
အို နံနက်သို့ရောက်တော့မည်။
Author Anonymous at 1:32:00 PM 1 မှတ်ချက်
Labels: တေးတေး ရေးတဲ့ကဗျာ
CyberLink LabelPrint 2.5.3602 (Full Version) CD/DVD ခွေ တွေရဲ့ Cover ပုံတွေလုပ်တဲ့ ဆောဝဲ
CyberLink LabelPrint လေးကတော့ CD/DVD ခွေ တွေရဲ့ Cover ပုံတွေ လုပ်တဲ့ ဆောဝဲလေး ဖြစ် ပါတယ်။ လက်ရှိ သုံးစမ်းကြည့်တာတော့ အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။ လွယ်လည်း လွယ်ပါတယ်။ CD/DVD Label တွေကို ဒီဇိုင်းရေးပြီး Print ထုတ်နိုင်တဲ့ CyberLink LabelPrint ဆောဝဲလေးပါ။
CyberLink ရဲ့ နာမည်ကျော်ဆော့ဝဲတွေထဲက တခုပါ။ Install လုပ်နည်း...
-Crack ဖိုင်ကို C:\_Program Files\_CyberLink\_LabelPrint\_ မှာ copy and paste လုပ်ပါ။
ပြီးရင်တော့ Full Version သုံးလို့ရပါပြီ။
>>>>>Download CyberLink LabelPrint 2.5.3602 (Full Version)<<<<<
Source by : www.linthit.com
Author Zaw Min Than at 11:40:00 AM0မှတ်ချက်
Labels: VCD-DVD Label Maker
Button စတိုင်လှလှလေးတွေ သုံးမယ်ဆိုရင် ( Blogger Only )
ကဲဗျာ မိမိတို့ဘေလာ့မှာ ခုလို လှပသေသပ်တဲ့ Button လှလှလေးတွေကို သုံးလိုပါက...နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေခံစားလိုက်ပါပြီနော်... လုပ်နည်းနဲ့ လိုအပ်တဲ့ ကုဒ်တွေကို အောက်မှာ လေ့လာလိုက်ပါနော်.....
Author Unknown at 10:00:00 PM 1 မှတ်ချက်
Button Style လှလှလေးတွေ လာပြီနော် ( Blogger Only )
မင်္ဂလာပါ ဘလော့ခရီးသည် ပရိတ်သတ်ကြီးးရေ...ခုတင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ မိမိတို့ဘလော့ပေးမှာ Button လန်းလန်းလေးတွေ သုံးခြင်သေူတွအတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးပါ..
ဒါလေးကတော့ ၄ မျိုးတင်ပေးထားပါတယ်... အကြီး...အလတ်...အသေး..သေးဝိုင်း...ဆိုတဲ့
ဆိုဒ်အရွယ်အစား တွေကို ခွဲခြားတယ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်... လိုအပ်သူများသုံးဆွဲ နိုင်ပါတယ်..
ကဲ အောက်မှာ နည်းလမ်းနဲ့အတူ.... လိုအပ်သောကုဒ်တွေကို လေ့လာ လိုက်ပါ
တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ သူ့အပေါ်ကကပ်ပြီး အောက်ကပေးထားတဲ့ကုဒ်တွေကိုထည့်လိုက်ပါ။
Author Unknown at 10:00:00 PM0မှတ်ချက်
CyberLink PowerDirector 12.0.2109.0 Multilingual Full Version With Cack
ဗီဒီယိုတည်းဖြတ် ချင်သော သူငယ်ချင်းတွေအတွက် CyberLink PowerDirector 12 Multilingual Full Version လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို ဖြတ်တောက်ခြင်း ၊ ဆက်ခြင်း ၊ အလင်းအမှောင်.. effect ..စာတန်း ထည့်ခြင်း စတဲ့အရာတွေ ကိုစိတ်တိုင်းကျ လုပ်လို့ရတဲ့ အကောင်းဆုံး ဗီဒီယိုရုပ်သံ တည်းဖြတ်တဲ့ဆော့ဝဲတခုပါ။
Magic, Corel Video Editor ဆော့ဝဲတွေထက်ပိုပြည့်စုံပါတယ်။ full version သုံးလို့ရအောင် Crack ဖိုင် ၄ ဖိုင် ပါတင်ပေးထား ပါတယ်။ Crack ဖိုင် (၄) ဖိုင်ကို C\_ Program Files\_ CyberLink PowerDirector\_ မှာ copy and paste လုပ်ပါ။ အဲဒီ (၄) ဖိုင်ထဲက 12 ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကို run လိုက်ပြီး Ok ကိုကလစ်ပေးပါ။
>>>>>Download CyberLink PowerDirector 12<<<<<
မှတ်ချက် : အဆင်မပြေမှု တခုခုကြုံရပါက aung575@gmail.com ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Author Zaw Min Than at 9:11:00 AM0မှတ်ချက်
Labels: Cyper Link Power Director, Videoတည်းဖြတ်မှုပညာ
Author Zaw Min Than at 9:37:00 AM0မှတ်ချက်
အလွယ်ကူဆုံး Add Elemic Green Menu ( အစိမ်းရောင် )
Author Unknown at 6:15:00 PM0မှတ်ချက်
အလွယ်ကူဆုံး Add Elemic Blue Menu ( အပြာရောင် )
Author Unknown at 6:10:00 PM0မှတ်ချက်
ဓာတ်ပုံပြင်တဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ Photo Shop မသုံးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
တန်းဖိုးကတော့ Adobe Photo Shop နဲ့နင်လားငါလားဘဲ
ကောင်းတယ်ဆိုတာ သုံးဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေသိမှာပါ အခုတင်ပေးလိုက်တာ
လိုင်စင်ထည့်နည်းကတော့ ဆောစ့်ဝဲလ် Install လုပ်ပါ ပြီးရင်
ဆောစ့်ဝဲလ်ကိုဖွင့်ပါ လိုင်စင်ကုတ်တောင်းပါမယ် ပါလာတဲ့ကီးကိုထည့်လိုက်ရင် အဆင်ပြေပါပီ
Author Unknown at 11:06:00 AM0မှတ်ချက်
ဖုန်းမှာ Facebook အကောင့်နှစ်ခုသုံးချင်ရင် ဖုန်းကနေ Photo Comment ပေးချင်ရင်ဒါသုံး
ဒီဟာလေး သုံးကြည့်ပါလား အဆင်ပြေနိုင်တယ် ။ မဖြစ်မနေ အကောင့်တွေ
ဖုန်းကနေ အများကြီးသုံးချင်ရင် နောက်ပီး ပုံတွေနဲ့ ကွန်မန့် တွေပေးချင်ရင်
မြန်လည်းမြန်တယ် သုံးရတာ။ တခြားဟာတွေကမှ လေးနေသေးတယ်ဗျိုး
စမ်းသုံးကြည့်တာအဆင်ပြေတယ် သုံးချင်သူ အောက်ကလင့်မှာယူလိုက်ပါ
Download- Opera Mini.apk
Author Anonymous at 9:23:00 PM6မှတ်ချက်
Photo Collage Max ဆိုရင်တော်တော်များများသိမှာ သုံးဖူးသူတွေလည်းရှိမှာပါ
Oct 8 ရက်နေ့ထွက် အပ်ဒိတ်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
သူငယ်ချင်းဓာတ်ပုံတွေကို အလှဆင်ပေးတာဖြစ်ဖြစ် လုပ်နိုင်ပါတယ်
http://www.photocollagemax.com/ မှာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေလေ့လာနိုင်ပီး
လိုင်စင်အတွက်ကတော့ ဆောစ့်ဝဲလ်ကို Install လုပ်ပါ
အသုံးမပြုပါနဲ့အုံး ပါလာတဲ့ Patch ဖိုင်ကို အသုံးပြုပါ
ပြီးပါ ဆောစ့်ဝဲလ်ကို လိုင်စင်တောင်းရင် ကီးကိုထည့်ပါ အဆင်ပြပါစေ
Author Free Firmware And Tools at 8:55:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: Photo ဒီဇိုင်းပြင်ချင်ရင်
Author Unknown at 6:04:00 PM0မှတ်ချက်
photoshop Colorနှင့်File Formatအကြောင်းသိကောင်းစရာ....
အနီ၊အစိမ်း၊အပြာ သုံးရောင်ထပ်လိုက်တော့ နောက်ထပ်ဘာရောင်တွေထွက်လာသလဲ
ပိုတိုရှော့ဝါသနာရှင်များအနေနဲ့ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းများကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင် Colorsအကြောင်းကိုတော့သိထားသင့်ပါတယ်။
ဒါမှသာပိုတိုရှော့ကိုလက်တွေ့ အသုံးပြုတဲ့အခါ အခက်အခဲမှရှိ လေ့လာနိင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုကျနော် အရောင်တွေရောစပ်ပုံကို ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကလာရောစပ်ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် CMYKနဲ့RGBဆိုတဲ့၂မျိုးကိုတော့သိထားရပါမယ်။
CMYKကိုတော့Subtractive Colorလို့ ခေါ်ပါတယ်။
RGBကိုတော့ Additive Colorလို့ ခေါ်ပါတယ်။
CMYKဆိုတာကတော့ Cyan-Magenta-Yellow-BlacKဆိုတဲ့ အခြေခံအရောင်လေးမျိုးနဲ့အရောင်တွေကိုရောစပ်ဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပြီး
အဲဒိကာလာတွေရဲ့ ထိပ်ဆုံးစကားလုံး C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=BlacKကတော့ Bကိုယူလိုက်ရင်
Blueနဲ့မှားမှာစိုးလို့နောက်ဆုံးစာလုံးဖြစ်တဲ့Kကိုယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
CMYKဟာ ဆေးရောင်မှင် (ink)တွေကိုရောစပ်ပြီး ကာလာမျိုးစုံ ဖန်တီးပြုလုပ်တာပါ။
RGBဆိုတာကတော့ R=Red, G=Green, B=Blue ဆိုတဲ့အခြေခံအရောင်သုံးမျိုးနဲ့အရောင်တွေကိုရောစပ်ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပြီး
အဲဒိကာလာတွေရဲ့ ထိပ်ဆုံးစကားလုံးRGBတို့ ကိုယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
RGBဟာ အလင်းရောင်စုံ(light)တွေကိုရောစပ်ပြီး အရောင်မျိုးစုံဖန်တီးပြုလုပ်တာပါ။
တစ်ဆက်တည်း ကာလာတွေ၇ဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်နဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုတယ်ဆိုတာပြောပြပါမယ်။
အနီရောင် အဓိပ္ပါယ်နဲ့ အသုံးပြုကြပုံတွေကတော့ ရဲရင့်ခြင်း၊ မာကျောခြင်း၊ စွမ်းအင်၊ သွေး၊မီး၊ စစ်၊ အန္ဒရာယ်နဲ့အချစ်သင်္ကေတ စတာတွေမှာအသုံးပြုကြပါတယ်။
ခရမ်းရောင် ကိုတော့ စွမ်းအား၊ တော်ဝင်ဆန်မူ၊ မြင့်မြတ်မှု၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၊ ရည်မှန်းချက် စတာတွေမှာအသုံးပြုကြပါတယ်။
အ၀ါရောင် ကိုတော့ နေရောင်ခြည်၊စွမ်းအင်၊တက်ကြွခြင်း၊ မျှော်လင့်ချက်၊ စတာတွေမှာအသုံးပြုကြပါတယ်။
လိမ္မော်ရောင် ကိုတော့ နွေးထွေးမှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ အောင်မြင်မှု၊ ဖန်တီးမှု၊ စတာတွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
အစိမ်းရောင် ကိုတော့ ရှင်သန်ကြီးထွားမှု၊ သဘာဝ၊ လက်ဆက်ခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်း၊ လုံခြုံမှု၊ ငွေကြေး စတာတွေမှာအသုံးပြုကြပါတယ်။
အပြာရောင် ကိုတော့ မိုးကောင်ကင်၊ ပင်လယ်၊ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ နက်ရှိုင်းခြင်း၊ တည်ငြိမ်ခြင်း၊စတာတွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
ဒါကတော့ အရောင်တွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေနဲ့အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြတာပါ။
ဒါကတော့ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ သိထားသင့်တဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစား File formatတွေရဲ့ အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုFileအမျိုးအစားတွေကိုသိထားခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင် ဖိုင်များသိမ်းဆည်းခြင်း၊ အခြားသော ဂရပ်ဖစ်ဖိုင်းများကိုဖွင့်ခြင်း၊
File formatဆိုတာကတော့ ဖိုင်ရဲ့ အမျိုးအစား(File Type)ကိုဆိုလိုတာပါ။
သိမ်းဆည်ထားတဲ့ ဖိုင်နာမည်တွေရဲ့dot(.)ရဲ့ နောက်မှာ၇ှိတဲ့ စာလုံးလေးတွေအပေါ်မူတည်ပြီး
ဖိုင်အမျိုးအစားတွေကွာပါတယ်။ တစ်ချို့ က အဲတာတွေကိုလုံးဝ နားမလည်သေးဘူး ကျနော်သေခြာပြောပြပါမယ်
အခုလက်ရှိကျနော်တို့Facebookမှာ နောက်ပြီး ဖုန်းတွေထဲမှာ အများဆုံး အသုံးပြုနေကြတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေရဲ့အမျိုးအစားက
အချို့ ဗျာ..အင်တာနက်ပေါ်ကို ပုံတွေတင်တဲ့အခါမှာ တစ်ချို့ နေရာတွေက ဓါတ်ပုံအမျိုးအစားရွေးပါတယ် သူသက်မှတ်ထားတဲ့ပုံ
အမျိုးအစားကလွဲရင် အခြားပုံတွေတင်လို့ မရပါဘူး အဲဒါကြောင့် ပုံတွေရဲ့ အမျိုးအစားတွေကို လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။
ဖုန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကွန်ပြူတာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်သိမ်းထားတဲ့ ပုံတိုင်းမှာ နာမည်(Rename)ရှိပါတယ် အဲဒိနာမည်နဲ့ အတူFile Type
ပုံအမျိုးအစားတွေက သူ့ အလိုလိုဖေါ်ပြပေးပါတယ်။
အခု ပိုတိုရှော့မှာလည်း Renameရဲ့ နောက်မှာdot(.)ခံပြီး File Type ရွေးခြယ်ပြီးSaveလုပ်ရပါတယ်။
(ဥပမာ) (မြန်မာ မင်းသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်) moe Hay ko.Jpg) (moe hay ok.psd) အဲဒါမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
File Typeတွေကို ရှင်းပြပါမယ်။
.psdဆိုတာကတော့ PhotoShop Documentရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး Adobeကပြုလုပ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့
ပိုတိုရှော့ရဲ့ native File Formatပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ ကိုသိမ်းဆည်းလို့ ရတာကလည်း ပိုတိုရှော့ပရိုဂရမ်နဲ့ ပဲဖြစ်ပြီး
ဖွင့်လို့ ၊ပြုပြင်လို့ ရတာကလည်း ပိုတိုရှော့ပရိုဂရမ်နဲ့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပိုတိုရှော့မှာ.psdအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဖိုင်ကိုသိမ်းဆည်းထားမယ်ဆိုရင်
ပိုတိုရှော့ထဲမှာပြုလုပ်ထားတဲ့ Layerတွေ၊ Styleတွေဟာ ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါ ပေါင်းဆည်း ရှုပ်ထွေးမူမရှိပဲ သိမ်းဆည်းထားစဉ်ကအတိုင်း
ဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့ ရှိတဲ့ ဒီိဇိုင်းတွေပုံတွေ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံပြုပြင်အသုံးပြုစရာရှိတဲ့ပုံတွေနဲ့အရည်အသွေးကောင်းမွန်ဖို့ လိုတဲ့
ပုံတွေကို PSDနဲ့ သိမ်းဆည်းထားသင့်ပါတယ်။
PSD Fileရဲ့ အားနဲချက်ကတော့ Layerတွေများလေ Fileအရွယ်အစားကြီးမားလေဖြစ်ပြီး
PSDနဲ့ သိမ်းထားတဲ့Fileတွေကိုမိမိရဲ့ WindowထဲမှာPreviewကြည့်လို့ မရသလို ပိုတိုရှော့ပရိုဂရမ် မရှိတဲ့စက်မှာဆိုရင်
အခြား ပရိုဂရမ်တွေနဲ့ဖွင့်ကြည့်လို့မရတာပါပဲ။
jpg jpegဆိုတာကတော့ အဲဒိJPEGဖိုင်အမျိုးအစားကို ဖန်တီးတဲ့ အဖွဲ့ ရဲ့ နာမည်ဖြစ်တဲ့ Joint Photographic Experts Groupရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး
pixmapလို့ ခေါ်တဲ့raster dataတွေကိုပဲသိမ်းဆည်းဖို့ ဖြစ်ပြီး Dataတွေကိုဖိသိပ်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့်
ဖိုင်အရွယ်အစားလည်းသေးငယ်ပါတယ်။Graphic Softwareအားလုံးလိုလိုဖွင့်လို့ ၊ အသုံးပြုလို့ ရတဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး
မည်သည့်ဆော့ဝဲမှ မရှိသည့်တိုင်အောင် Windowထဲမှာဖွင့်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
windowမှာသာမက အခြားOSတွေနဲ့ Digital TVတွေ၊ DVD playerတွေမှာလည်း ဖွင့်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင်MP4တွေ၊Mobile Phoneတွေ၊ Digital Cameraတွေမှာလည်း ကြည့်ရှုအသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။
ပြောရရင်တော့Digitalပစ္စည်းတိုင်းလိုလိုမှာဖွင့်ကြည့်လို့ ရတယ်ပေါ့။ ဒါဆို ပိုတိုရှော့သုံးရင် ဘာကြောင့်JPG/JPEGနဲ့ မသိမ်းတာလည်း
ဆိုရင်တော့ သူ့ မှာလည်း အားနဲချက်တွေရှိလို့ ပေါ့။
ပိုတိုရှော့မှာအလုပ်တွေလုပ်ပြီး သိမ်းလို့ ရပေမယ့်LayerတွေStyleတွေဟာပေါင်စည်းသွားပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိမြင်နေရတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ ကြည့်လို့ ကောင်းရုံသာ သိမ်းစည်းလိုက်တာပေါ့။
သိမ်းထားတာက ဖိုင်အရွယ်အစားသေးပေမယ့် တကယ်တမ်း အရည်အသွေးခြင်း ယှဉ်လိုက်ရင်တော့
PSDကိုမမှီပါဘူး။ ဒါကြောင့်JPGကိုပြန်ပြင်စရာမလိုတော့တဲ့ဒီဇိုင်းတွေ၊ လူအများကိုမျှဝေချင်တဲ့ပုံမျိုးတွေနဲ့အင်တာနက်ပေါ်မှာအသုံးများပါတယ်။
ကိုယ်က အလုက်တစ်ခုကိုSPDနဲ့ လည်းသိမ်းတယ်၊JPGနဲ့ လည်းသိမ်းတယ်ဆိုရင် ပြန်ပြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါ မူလPSDဖိုင်ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးပြင်ပါ။
JPGကိုပြင်ပြီး ထပ်မသိမ်းပါနဲ့အခုနကပြောသလို ကြည်လင်ပြတ်သားမှု မရှိတော့မှာသေခြာပါတယ်။ PSDမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့
Portable Network Graphicsရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး Web(internet)ပေါ်မှာ အသုံးများပါတယ်။
JPEGလို ဖိုင်အရွယ်အစားက မကြီးပါဘူး။ Layerတစ်ခုတည်းပေမယ့် Transpraentအဖြစ်သိမ်းလို့ ရပါတယ်။ သိမ်းတဲ့အခါDataဆုံးရှုံးမှုလည်းနဲပါတယ်။
Web Designအတွက် အဓိကသုံးပြီး Print Mediaတွေမှာတော့မသုံးပါဘူး။ JPEGလို Deviceတိုင်းနဲ့ တော့ အဆင်မပြေပါဘူး။
Tagged Image File Formatရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး၊ JPEGလိုImageဖိုင်ပါပဲ ဒါပေမယ့် ဖိုင်အရွယ်အစားက ပိုကြီးပါတယ်။
printingလုပ်ငန်းတွေမှာ အဓိကထား အသုံးပြုကြပါတယ်။ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းတွေ ဗွီနိင်းလုပ်ငန်းတွေလိုမျိုးပေါ့ Digital Imageကနေ တကယ့် Real Imageဖြစ်မလာခင်
ပုံမထုတ်ခင် နောက်ဆုံးအသုံးပြုတဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစားပါ၊ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပါတယ်။
Graphic Interchange Formatရဲ့နာမည်အတိုကောက်ဖြစ်ပြီးအရောင်က 256 Colorပဲရတဲ့အတွက် ပုံထွက်အရည်အသွေးညံ့ပါတယ်။
Logoတွေ၊ Diagramတွေနဲ့ ကာတွန့် ပုံလေးတွေမှာ အသုံးများပါတယ်။
အားသာချက်ကတော့ Animationတွေကို ပြုလုပ်သိမ်းစည်းနိင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့Animationတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဓါတ်ပုံလေးတွေ တစ်ပုံနဲ့ တစ်ပုံပြောင်းတာ၊ စာသားလေးတွေပြောင်းပြီးပေါ်တာ၊ အရုပ်လေးတွေလှုပ်ရှားမှု၊ ပြောင်းလဲမှုEffectအနည်းငယ်ကိုသိမ်စည်းပေးထားနိင်ပါတယ်။
BMP File formatလို့ လူသိများတဲ့ Windows Bitmap File Formatကိုတော့ Windowsထဲမှာသာအသုံးများပါတယ်။
paintနဲ့Wordpadလိုprogramမှာ သုံးပါတယ်။ Professionalအနေနဲ့ တော့ မသုံးကြပါဘူး။ File Sizeလည်းကြီးပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင်Colorအမျိုးအစားနဲ့ Fileအမျိုးအစားတွေကို နာလည်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်
ကျနော်လည်း ပိုတိုရှော့ကို အချိန်ရသလောက်လေ့လာ(ကလိ)ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာတယ်ဆိုတာကလည်း ကိုယ့်ထက်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာတွေ ရေးသားထားတဲ့
ပိုတိုရှော့ဆိုင်ရာ စာအုပ်တစ်ချို့ ကို ကျနော်ဖက်ပြီးကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲကြည့်ပါတယ်။ နောက်ဆိုရင် ရေးဆွဲနည်းတွေကို ပုံနှင့်တကွတင်ပြပေးထားပါမယ်။
အချိန်နဲနဲတော့ကြာမယ်ဗျာ။ အခြားဆော့ဝဲတွေ တင်ဖို့ အတွက်လည်းပြင်ဆင်ရသေးတယ် အလုပ်ကတစ်ဖက်နဲ့ ဆိုတော့ ကျနော်တတ်နိင်သလောက်ပေါ့ဗျာ။
ဖြစ်နိင်ရင် တစ်နေ့ တာအတွက် ၂၄နာရီကနေ ၄၈နာရီသာဖြစ်လိုက်ချင်တယ်။ အလုပ်ကပြန်လာလို့ကျနော့အတွက် ရတဲ့အချိန်လေးဟာ ကွန်ပြူတာဖွင့်ပြီး
ဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်နေဖို့ အချိန်သာဖြစ်ပါတယ်။ ၀ါသနာကလည်းကြီးတော့ ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ အိပ်စက်ခြင်းဆိုတာကိုလည်းမုန်းတီးနေရတဲ့ လူမိုက်လေးကျနော်ပါဗျာP:
ကျနော့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ဘာလဲဆိုရင် ဒီလိုBloggerလေးတစ်ခုလုပ်ပြီး နည်းပညာတွေ မျှဝေနေတာဟာ ကျနော့ထက်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာတွေဆီကလည်း
နည်းပညာတစ်ချို့ ကိုရလိမ့်မယ်၊ ကျနော့နောက်က မသိနားမလည်သေးတဲ့ ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်လည်း နည်းပညာတစ်ချို့ ကိုရလိမ့်မယ်၊ ဒီလိုနည်းပညာတွေကို
လေ့လာ၊ မျှဝေနေရတဲ့အတွက် ကျနော်ရဲ့ စိတ်တည်ငြိမ်မှုတစ်ခုကိုရလိမ့်မယ်၊ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ဒီပညာတွေဟာ တစ်နေရာရာကနေ ကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မယ် ဆိုတဲ့
ရည်မှန်းချက်နဲ့ သာ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းခံပြီး လုပ်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်. ကျနော့ရဲ့ဆိုဒ်လေးကို လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ ညီကိုမောင်နှမတွေလည်း ကျနော့ရဲ့ စိတ်ရင်းမှန်ကို ဒီလောက်ဆိုရင်သိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကဲ.ကဲ.မိုးလင်းတော့မယ် အိပ်လိုက်အုံးမယ်နော် မိုးလင်းရင်အလုပ်သွားရမယ်P: တာ့တာ..
Author Unknown at 5:46:00 PM 1 မှတ်ချက်
Labels: Photoshop နှင်ဒီဇိုင်းပညာများ
Genuine ဖြစ်ပြီးသား နောက်ဆုံးထွက် Windows7Regal Business Edition 2014 SP1 x86 Activated (3.42 GB)
အခု ၉-လပိုင်း (Sep/2013) မှာ ထွက်လာတဲ့ Windows7Regal Business Edition 2014 SP1 x86 ကို
တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ Icon, Folder Icon, Startup Menu, Gadget, Windows Theme များ တကယ်လန်းပြီး ဂိမ်းကြိုက်သူများအတွက် ဂိမ်းတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကစားနိုင်တဲ့ Windows7Regal Edition ဖြစ်ပါတယ်။ Desktop Gadget လဲ (၂ဝဝ) ရာကျော်ပါဝင်ပါတယ်။
Activated လုပ်ပေးပြီး Genuine ဖြစ်ပြီးသားမို့ Activate ထပ်၍ လုပ်စရာမလိုပါ။Boot လုပ်ပြီးတာနဲ့ အသင့်သုံးရုံပါပဲ။ Windows7Regal Business Edition 2014 SP1 x86 မှာပါဝင် တဲ့ ဆော့ဝဲတွေကတော့...
Adobe Flash Player(IE), Adobe Flash Player(Non IE)
(Browser ဖွင့်ပြီး Youtube မှအစ ဗီဒီယိုတွေ ကြည့်ရင်တခြား Edition တွေလို Flash Player သီးသန့် အင်စတော လုပ်စရာမလိုပါ။)
CCleaner, Google Chrome, WiFi, Wireless, WLan Drivers များနဲ့ အခြား Drivers များ ကိုဝင်းဒိုးတင်ပြီးတာနဲ့ စက်မှာ အင်စတောလုပ်ပြီး သားတွေ့ရပါမယ်။ စိတ်ဝင်စားလို့ သုံးကြည့်ချင်ရင် အောက်မှာဒေါင်းလုပ်ယူလိုက်ပါ။ဖိုင်ဆိုဒ်က 3.42 Gb ဖြစ်လို့ RAR ဖိုင် (၆)ဖိုင်ခွဲ ပြီးတင် ထားပေး ပါတယ်။
ဖိုင်(၆)ဖိုင်လုံးကို ဒေါင်းလုပ်ယူပြီး Select All လုပ်ပါ။ ပြီးရင် WinRAR နဲ့ Extract လုပ်ပါ။ Windows ISO ဖိုင်တဖိုင်ထဲပြန်ထွက်လာပါမယ်။
(ဖိုင်ခွဲတာက WinRAR နဲ့မို့ Select All လုပ်ပြီး WinRAR နဲ့ Extract လုပ်ရုံပါ။ ဘာပြဿနာမှမရှိပါ။)
ISO ဖိုင်ကို DVD (သို့) USB Flash Drive (4 Gb) မှာ Power ISO/ Windows7USB Tool တို့ကိုသုံးပြီး Bootable Image အဖြစ် Burn ပါ။ပြီးရင် ဝင်းဒိုးတင်နိုင်ပါပြီ။
>>>>>Download Windows7Regal Business Edition 2014<<<<<
Author Zaw Min Than at 12:08:00 AM5မှတ်ချက်